Dhaqtarad kumanaan haween ah ka badbaadisay Kansarka ku dhaca naasaha - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka University of Toronto Archives
Image caption Dr Vera Peters oo ku sugan xarunta Kansarka Ontario sannadkii 1958-dii
Vera Peters waxay baddashay nolosha kumanaan haween ah oo la il-darnaa kansarka ku dhaca naasaha inkasta oo ay dadaallada ay ku badbaadineysay haweenkaas ay dhaleeceen kala kulantay.
Haweeneydan dhaqtaradda ah waxay u dhalatay Kanada, waxay ka shaqeyn jirtay in bukaanada ay u sharraxdo dawooyinka ay u baahnaayeen.
Markii ay billawday qalliinada ay ku sameyn jirtay haweenka uu ku dhacay Kansarka naasaha, sannadkii 1950-kii, waxay wajahday kalinimo maadama ay howshan ku badnaayeen dhaqaatiirta ragga ah.
Xilli lagu guda jiro bisha dadweynaha lagu baraarujinayo kansaraka naasaha ku dhaca, waxaan halkan idiin kuugu soo gudbineynaa sheekada ku saabsan haweeneydan oo aheyd dhaqtar daryeesha bukaanada.
'Qalinkii lagu guuleystay'
Image caption Muuqaalka Kansarka ku dhaca naasaha
Qarnigii 20-aad, qaababkii la marsiin jiray bukaanada Kansaraka naasaha ku dhaca waxay mari jireen xannuun darran, xitaa waxaa laga saari jiray burada Kansarka gaar ahaan xabadka, naaska.
Inkasta oo qalinkaas uu daweyn jiray Kansarkaas, waxay haweeneyda kala kulmi jirtay dhibaatooyin badan oo dhanka caafimaadka ah gaar ahaan inuu bararo naaskeeda iyo in socodka uu ka lumo.
Lammaane isu dhigay rasaas ku dhici lahayd wiilkooda
Maxaa sababa xasaasiyadda cuntada laga qaado?
Qalliinkan wuxuu saameyn jiray maskaxda bukaanada, qaliinkan waxaa hinddisay dhaqtar u dhashay Mareykanka oo la oran jiray, William Halsted, waxay aheyd dabayaaqadii qarnigii 19-aad, Boqolaal sanno kaddib waxay dhaqaatir badan ku tilmaameen 'qaliinka uu hinddisay dhaqtarkaas' inuu yahay midka ugu wanaagsan.
"Waxay bixi jireen iyagoo naasaha laga saaray'
Image caption Qaliinka ay mari jireen dumarka uu ku dhaca kanasarka naasaha
Xilliggaas, bukaanada gaar ahaan haweenka, lama siin jirin fursad ay sharraxaad kaga bixiyaan dhibaatooyinka caafimaad ee heysta.
Dr Ingram waxay sheegtay in bukaanada qabay kansarka naasaha ee walaac ka muujiya qaliinka oo dhaqatiirtaii sameyneysay lagu tilmaamay kuwa waalan.
Taarikhda qoys uu ku dhacay Kansarka naasaha
Lahaanshaha sawirka Jennifer Ingram
Image caption Dr Peters iyo gabadheeda Dr Ingram
Dhaqtar Vera Peters waxay hooyadeed u dhimatay xannuun in muddo ah hayay sannadkii 1933-kii, geerida ku timd hooyadeed waxay ku reebtay welwel iyo walbahaar.
Qoyskeeda wuxuu ku noola beer lagu xannaaneeyo lo'da oo ku taal agagaarka Toronto, waxay dhameysay dugsiga sare markii ay jirtay da'da 16 jir.
Waxay baran jirtay maddooyinka xisaabta iyo Physics ka hor inta aysan u weecan barashada cilmiga dhaqtarnimada oo ka dhigatay jaamacadda Toronto.
Dhaqtar Vera Peters waxay kamid aheyd 10 haween ah oo bartay cilmiga dhaqtarnimada sannadkii 1935-kii, waxay kasoo dhex baxeen fasal ay ku jireen ardey gaareyso 100.
Daweynta bukaanada xaaladdooda ay halista tahay
Image caption Haddii uu kansarka uu kuugu dhaco 'waxaa si cad luguugu sheegay waxa kuugu dhici kara" ayay tiri gabadha dhaqtaradda, Vera
Dhaqtar Vera Peters, ma aheyn oo kaliya ah inay ku guuleysatay qaliinka Kansarka ku dhaca naasaha balse waxay ku guuleystay daweynta nooc kamid ah Kansarka ku dhaca dhiigga.
Xilliggaas, Kansarkaas dhiigga ku dhaca waxaa lagu tilmaami jiray mid aan la daweyn karin balse Dhaqtar lagu magacaabo Richards ayaa sannadkii 1947-dii wuxuu weydiiyay Dhaqtaradda inay dib u eegis ku sameyso natiijada.
Sannadkii 1950-kii, Dhaqataradda waxay daabacday qoraal ay ku doodeyso in la daweyn karo kansarka.
Waxay dunida ka dhalisay dood ilaa toban sanno kaddib ay dunida kusoo baraarugtay daraasaadkii caafimaad ay sameysay.
"Marka aad soo bandhigeyso waxyaabo aan kamid aheyn waxyaabaha adag in sida caadi ah loo aamino waxaad arkeysaa in lagaa aamin baxo" ayay tiri sannadkii 1979-kii.
Dadka waxay uga imaan jiray guud ahaan dunida
Sannadkii 1958-dii, waxay bilaawday inay ka howlgasho isbitaalka Princess Margaret Hospital.
Waqtigaas, waxay noqotay dhaqtar buuxo oo daweyn karay Burada, Dhaqtar Peters waxaa uu imaan jiray dhammaaan bukaanada kasoo jeeday gobolka Ontario kuwaas oo ay suuroogeli weysay inay maraan qalinkii qarniyadii 19-aad iyo 20-aad.
Waxay daweyn jirtay bukaanada uu ku dhacay kansarka naasaha.
Siddeed siyaabood oo looga hortago wahsiga
Image caption Dr Vera Peters oo bixineysa cashar ku saabsan Kansarka
Dr Peters waxay bilaawday inay wax ka qorto natiijooyinka ay heshay laga bilaabo horraantii sannadkii 1967-dii, sannadkii 1975-kii waxay daabacday daraasaad qoto dheer oo ku saabsaneyd 8,000 oo bukaan ah oo qabay Kansarka oo ay ku daaweysay intii ay ka howlgaleysay isbitaalka Princess Margaret Hospital intii u dhexeeysay sanadihii 1939-kii iyo 1969-kii.
Waxay daraasaddu muujisay in tirada bukaanada ka badbaaday qaliinada darran in aysan ka badneyn kuwo maray qaliinada aan sidaas u darneyn.
Natijadda daraasadda ayaa laga soo horjeestay.
Image caption Dr Vera Peters oo shahaadada PHD ka qaadatay jaamacadda Queen's University sannadkii 1983-dii
Maanta, waxaa la bogaadinayaa shaqadii ay qabatay Dr Vera Peters kaas oo horseeday in maanta aan haweenka qaba Kansarka naasaha ay yartahay qaliinka daran ee looga saarayo naasahooda si loo badbaadiyo.
Waxaa sannadkii 1970-kii la guddoonsiiyay Dr Vera shahaado sharaf taas oo lagu bogaadinayo kaalintii ay ka qaadatay u gargaaridda aadanaha.
Waxay sidoo kale qaadatay 2 shahaado PHD ah, waxaa sidoo kale la guddoonsiiyay abaal marinno Maar ah xilli ay ku sugneyd Mareykanka, Canada iyo Yurub.
Sannadkii 1984-tii, Dr Vera waxaa ku dhacay Kansarka naasaha ku dhaca, waxaana laga daweeyay kansarka dhiigga balse 9 sanno kaddib iyadoo jirto da'da 82 ayay u geeriyootay Kansarka ku dhaca Sanbabada markii muddo 3 bilood kaddib ay ku jirtay isbitaalkii inta badan ay ka howlgali jirtay ee Princess Margaret.